Akoho ao anaty lafaoro misy ovy sy holatra - fomba fahandro
Akoho, ovy, holatra - atsaho amin'ny lafaoro, tsy sakafo hariva mahafinaritra ve izany? Tsotra ny fomba fahandro ary tsy mila fotoana firy, ary aorian'ny akoho voaendy toy izany dia tsy misy afa-tsy fiheverana tsara ihany no ho azonao!
akoho 1 kilao 400 g;
ovy 8 pcs;
tongolo 2 pcs;
mifangaro mifangaro iray;
sira, zava-manitra hafa arakaraka ny tsironao;
Fandrahoana akoho voaendy ao anaty lafaoro:
1. Amboary ny vorona toy ny mahazatra: tazomy amin'ny afo, afaho amin'ny atiny, sasao, maina amin'ny servieta.
2. Ny dingana voalohany amin'ny recette dia ny manosotra ny akoho eo amboniny sy ao anatiny miaraka amin'ny sira, dipoavatra, turmerika ary zava-manitra hafa. Manosotra sira bebe kokoa. Avela hilona mandritra ny adiny 2 ny akoho. Mandritra io fotoana io dia hisongadina ny ranom-boankazo.
3. Avy eo dia tokony endasina amin'ny lapoaly ny akoho mandra-volontany volamena amin'ny menaka legioma voadio mafana.
4. Manaraka, arakaraky ny fomba fahandro akoho ao anaty lafaoro, amboary ny holatra: sasao amin'ny borosy ary tapatapahina ho lehibe.
5. Endasina amin'ny menaka legioma ny tongolo voatetika, avy eo arotsaka ny holatra ary atsimohy mandra-pahatongan'ny etona.
6. Peel ary tapaho ny ovy ho voadio lehibe, ampio sira, dipoavatra ary endasina kely amin'ny lapoaly mafana amin'ny menaka legioma. Mandroso amin'ny dingana manaraka isika ao amin'ny fomba fahandro handrahoana akoho ao anaty lafaoro.
7. Afangaro amin'ny holatra ny ovy.
8. Fenoy ny akoho amam-pamenoana ary apetraho ao anaty tanam-panafody. Apetraho eo akaikiny ny ambin'ny famenoana. Afatory amin'ny sisiny roa ny tanany ary apetraho amin'ny lafaoro.
9. Endasina ao anaty lafaoro ny akoho mandra-pisehoan'ny ranony madio. Misafidy ny fotoana mifototra amin'ny lanjan'ny akoho isika: lanja 1 kg - adiny 1.
Noho izany, mahandro ny akoho ao anaty lafaoro mandritra ny adiny 1 sy 40 minitra izahay.
Ny akoho ao anaty lafaoro misy ovy sy holatra dia vonona, azonao apetraka eo ambony lovia io.
Androany dia nianatra ny fomba fahandro ianao fa mora amin'ny fahandro akoho ao anaty lafaoro miaraka amin'ny ovy sy holatra.
Ahoana ny fomba fahandroana akoho ao anaty lafaoro ao anaty foil: fomba fametahana dingana
Lebanese Lemon Garlic Gar Recipe
Akoho matsiro sy be ranony ao anaty microwave: fomba fahandro
Amin'ny mari-pana inona no andrahoanao ny akoho ao anaty lafaoro ary atody
Prev Daty jamba: ahoana ny fomba fitondran-tena?
Manaraka Hamitaka ve ireo andriamby fitahirizana solika?
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,756.